Ọgwụ akpụzi, Plastic Ọgwụ akpụzi, Tooling Maker - Yuanfang
50setịpụrụ / ọnwa
ihe nchọgharị gị anaghị akwado mkpado vidiyo
Ma oru ngo gi pere mpe ma o bu oru ngosiputa omenala nke choro ihe ndi puru iche, nyocha, na ogbugbu zuru oke, anyi nwere ike ime ya. Na YuanFang oru niile dị mkpa, n'agbanyeghị nha. Anyị na ndị enyi anyị nwere mmekọrịta chiri anya n'akụkụ ụwa niile nke na-ekwe nkwa na anyị nwere ikike iji mezue ọrụ ọ bụla site na ịzụta ihe iji gosipụta ịkpụzi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nweta A Free Ekwu Ugbu a
Yuanfang na-enye ndị mmadụ ọrụ ngwa ngwa mgbe a rịọrọ ha.
High-nkenke Ọgwụ akpụzi
Inweta ngwaahịa site na imewe ruo na mmecha bụ ọrụ mgbagwoju anya. Yuanfang Technology ga-abụ onye gị na mmepe nke mmemme gị site na echiche na ikekwe, site n'ichepụta na nnyefe, ebe ị na-enye uru dị elu. Ọrụ anyị bụ iduga gị n'ọkwa ọhụrụ nke ihe ịga nke ọma.
Anyị na-egwu n'ime gị oru na gị ogologo oge tupu ngwá ọrụ imewe na anyị na-eche na ị na ụzọ niile site na n'ichepụta na nnyefe Filiks. Yuanfang Technology nwere ike inyere gị aka na nyocha, nyocha nhazi dị elu, nhọrọ ihe, imewe maka ndụ ndụ, na nrụpụta iji ruo ihe mgbaru ọsọ gị ogologo oge.
Ahụmahụ. Teknụzụ Na-akwagharị. Innovation gbakwasara. Ndi otu anyi di njikere iduru gi gaa na oganihu ohuru.
Nke ahụ bụ Yuanfang Technology. Obi ụtọ na ọdịiche ahụ.
Ebu Trial & Nkedo
Ihe Atọ You Na-enweghị Ike Ileghara Anya Mgbe fer Na-ezo Aka ...
Sixzọ isii iji mụbaa ndụ ngwaọrụ
Omenala akpụzi, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Plastic Fanye Nkedo, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Akpụzi Factory,